Ruushka Oo Wadamada Galbeedka Ku Eedeeyey Inay Hor Istagayaan Marti Gelinta Ciyaaraha Aduunka Ee Moscow | Baligubadlemedia.com
Ruushka Oo Wadamada Galbeedka Ku Eedeeyey Inay Hor Istagayaan Marti Gelinta Ciyaaraha Aduunka Ee Moscow
April 1, 2018 - Written by admin
Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka oo lagu magacaabo Maria Zakharova ayaa ku eedaysay Ingiriiska iyo Mareykanka inay isku dayayaan in dalkeeda ay ka hor istaagaan martigelinta Koobka Adduunka ee sanadkan.
Wareysi dheer oo ay siisay telefishin laga leeyahay Ruushka, ayay ku sheegtay in ujeeddadooda ugu weyn ay tahay in Koobka Adduunka ay ka wareejiyaan Ruushka.
UK ayaa raadineysay inay ciqaabto Ruushka iyadoo ku eedeysay weerarkii sunta ee ka dhacay Britain.
Qoyska Boqortooyada ayaa ka soo horjeesan doona Koobka Adduunka, tan oo qayb ka ah falcelinta Britain.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda UK Boris Johnson ayaa Koobka Adduunka ee Ruushka la xidhiidhiyey Cayaarihii Olombikada ee Naasiyiintii Jarmalka sanadkii 1936. Xildhibaan mucaarad ah ayaa isagana ku baaqay in Koobka dib loo dhigo ama meel kale loo wareejiyo.
Si kastaba ha ahaatee ma jirto xog laga hayo in kooxda England aaanay ka qaybgeli doonin cayaaraha, oo furmaya bisha June.
Tiro dublamaasiyiin ah ayay labada dhinacba iska caydhiyeen, sababo la xidhiidha sumeyntii magaalada Salisbury loogu geystay basaas hore oo Ruushka u dhashay Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia 4-tii March.
Tallaabadii ugu dambeysay, ilaa 170 diblomaasiyiin Ruushka u dhashay iyo xubnaha qoyskooda ayaa Jimcihii iskaga baxay Washington.